Gaa Lago di Como | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Nduzi, Italia
Ọ bụrụ na e nwere a mara mma ọdọ mmiri odida obodo ke Italy, na bụ Ọdọ Como. Lee ntakịrị ihe niile jikọtara: mara mma ọdịdị, ịdị mma, ugwu na ụgbọelu mba. O doro anya, George Clooney nwere ụlọ ebe a kamakwa ọtụtụ ezinụlọ ndị a ma ama si Italytali ma ọ bụ Switzerland.
Ghaghị ịma Lago di Como, yabụ ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem ị ga-aga Italytali n'ọdịnihu, ị nwere ike ịgagharị ọdọ mmiri na mpaghara Como niile mara mma na onye agbata obi ya, Lecco. Ka ahụ kedu ihe omume, ebe na nkuku anyị kwesịrị ileta.
1 Ọdọ Como
2 Nlegharị anya na Lago di Como
Ọdọ mmiri dị n'ógbè Como, na mpaghara Candela, Italy, na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 200 nke elu. Nwere a elu nke square kilomita 146 na ọ bụ nanị ihe karịrị 400 mita miri emi. N'ihi ya, ọ bụ ọdọ miri emi ọ bụkwa ọdọ mmiri nke atọ kacha ibu n’obodo a.
Ọdọ mmiri O nwere ogwe aka ato: Como, Lecco na Colico. N'aka nke ya, Como ogwe aka nwere akụkụ atọ ndị ọzọ na nke mbụ ya na obodo Como dakọtara. Agwaetiti Comacina, naanị otu onye nwere ọdọ ahụ na-eme mkpọmkpọ ebe ndị Rom. E nwere ọtụtụ obodo dị n'ụsọ ọdọ mmiri ahụ na ụfọdụ ụlọ ndị mara mma na nde mmadụ bụ nke ndị na-ese ụwa dịka nke m kpọrọ aha, Clooney, ma ọ bụ ọbụna Madonna.
Aha ndị a dị ugbu a, mana ịma mma nke ọdọ ahụ bụ akụkọ ihe mere eme ka ndị amaala akụkọ ihe mere eme jikwa ịhụnanya maka ọdịda ala: Bonaparte, Verdi, Winston Churchill, Da Vinci... N’ezie, a na-ese ọtụtụ fim na ihe nkiri TV.
Nlegharị anya na Lago di Como
Anyị nwere ike ịmalite na dị ka ogwe aka, maka obodo ya. Como Ọ bụ akara aka Chukwu, ya na Ogige Katidral, nnukwu iwu, thelọ Ego Ọchịchị ma ọ bụ Broletto. Katidral ahụ dị n'ụdị ndị Gothic ma nwee ọrụ aka ebe niile. O sitere na njedebe nke narị afọ nke XNUMX n'agbanyeghị na e dechara ya naanị n'etiti narị afọ XNUMX.
Site na Como, mmadụ nwere ike iji ụgbọ njem gaa gaa mara obodo ndị dị n'ụsọ oké osimirika ihe atụ, ama Bellagio ya na ubi ya na obodo nta ya, nke ama ama n’uwa nile: Villa Este ma ọ bụ Villa Olmo, taa ụlọ nkwari akụ ise. Ọ bụrụ n ’ịga n’oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n’oge ọkọchị, ị ga - ahọrọ ịga ije ka ị nwee ike ime ya site na mma ogige ntụrụndụ nke Como Nke kachasị bu Parco Spina ma ọ bụ Parco Sovraccomunales Brughiera Briantea nke hekta puku iri abụọ na atọ.
Ọ bụrụ n ’ọdịmma nka na omenaala na-amasị gị, mgbe ahụ enwere ụfọdụ ngosi nka na-akpali Como nwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie obodo anọ na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ndị ọzọ na mkpokọta dị iche iche. Otu n'ime ndị mbụ bụ Museumlọ ihe ochie mgbe ochie, nke Iblọ ihe nkiri Garibaldi nke akụkọ ihe mere eme, ndị Obodo Pinacoteca na Plọ ihe nkiri Tempio Voltiano nke a raara nye onye edemede a ma ama Alessandro Volta. Ọzọkwa, na-akpali, bụ Como Silk Museum.
Kemgbe afọ e nwere ndị dị iche iche ihe na karịsịa mara mma bụ ahịa ebe enwere ihe mgbe ochie, oche na akwa nke oge niile. E nwekwara baths oge ochie romanN’ezie, ihe nketa ndị Rom dị n’obodo ahụ n’onwe ya na gburugburu ya. Ọnọdụ ihu igwe dị nro na nke dị ụtọ meriri Pliny nke Nta otu mgbe, dịka ọmụmaatụ, yabụ ndị Rom bara ọgaranya wuru ụlọ ntụrụndụ ha ebe a.
Ndị ezinụlọ achibido Como na Milan soro ha na narị afọ ndị sochirinụ, yabụ taa enwere Villas Vigoni, Villa Salazar, La Gaeta, La Quiete, Palazzo Manzi, Villa D'Este ... niile ụlọ akụkọ ihe mere eme Ndi debere oru aka ha. Ọnụ ọgụgụ saịtị ị nwere ike ịhụ na Como bụ ihe ịtụnanya n'ihi na ndụmọdụ m bụ ime ezigbo nyocha n'ịntanetị ka ị ghara ịhapụ ihe masịrị gị wee mechaa hụ ihe na-abụghị nke mmasị gị.
El lecco ogwe aka O nwekwara nke ya, ya na ọnụ ọgụgụ nke Resegone na Grigna na-ahụ. Bụ obodo ugwu Ọ nwere ọtụtụ njirimara ọdịbendị ma bụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe mbụ na dedicatedtali raara nye ígwè na nchara, ọrụ na-aga n'ihu kemgbe narị afọ nke iri na abụọ. Ọ nwere ọmarịcha mbadamba ụgbọ mmiri na dị nnọọ ihunanya na ọ dị nso obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri mara ezigbo mma dịka, Varenna, Mandello ma ọ bụ mkpọda ugwu nke Valsassina.
Varena ọ mara mma ma dịkwa obere obodo azu nke dị n’etiti ọdọ mmiri ahụ na nke a ma ama maka ala ochie na-acha oji mabụ ọcha na nke ọcha na ịdị nso na mpaghara mara mma nke Brianza. Ọ bụ saịtị nke n'okporo ámá ndị dị warara na-agbada n'ọdọ mmiri ahụ na njem mara mma, ọtụtụ na-akpọ ya nanị "n'okporo ámá nke ịhụnanya." Enwekwara ụka ochie anọ, nke ụdị dị iche iche na ụfọdụ ụlọ mara mma ndị ghọziri họtel họpụtara ugbu a.
Site na Varenna, n'aka nke gị, ị nwere ike ịgbaga Mmeghe, aha ya bụ ụdị ụfụfụ na-acha ọcha nke na-apụta site na isi mmiri n'ọgba nakwa na n'oge ụfọdụ nke afọ na-awagharị n'akụkụ ọdọ ahụ. Ọzọkwa dị nso bụ Lelọ nke Vezio, na Esino Lario, na ụlọ elu ya ochie, ụlọ nke Lombard queen Teodolinda. Taa ọ na-emeghe ka ọha na eze ma site n'ebe ahụ echiche nke ọdọ bụ ihe ị ga-ahụ.
Obodo nta nke MandelloMaka akụkụ ya, ọ dị n'ugwu ma ọtụtụ n'ime ndị na-eleta Lecco tinye ya na njem ahụ. Okwesiri nleta maka mma alpine nke okirikiri ala ya, maka ụsọ mmiri ya na ihe omume mmiri n'oge, maka ụlọ mmanya ya na ụlọ nri ya na mmemme egwu ya na motocross.
Ebe ndi ozo enwere, ya na oge na nhazi, bu Ndagwurugwu San Martino na Valee d'Intelvi. A na - achọta nke mbụ mgbe Lago di Como na-asọba n'osimiri Adda. Ọ bụ ndagwurugwu dị n'etiti mpaghara Milan na Republic of Veneto, mara mma, ala ochie, nke jupụtara n'akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị. O nwere ọdọ nke aka ya, ọdọ mmiri Garlate, ugwu ugwu, ọnụ ugwu na-acha akwụkwọ ndụ, Rossino Castle, ebe obibi ndị mọnk ochie nke narị afọ nke XNUMX na frescoes nke narị afọ nke XNUMX na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị hazie obodo ma ọ bụ obodo nta ị ga-aga nke ọma, i kwesịrị ịmata nke ahụ enwere ọtụtụ njem ụgbọ mmiri na-amalite na Como ha na-egwu ebe dị ka Blevio, Tomo, Moltrasio na Cernobbio, ndị dịkwa ụzọ gasị mara mma na-eme ka anwụ na-acha ụbọchị, na Caminos de Vía Regina, ka ihe atụ, nnọọ omenala, na na ọchị na Brunate, site na narị afọ nke XNUMX, na-enye gị echiche kacha mma nke ọdọ mmiri na gburugburu ya. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọ na-akpọrọ gị gaa ebe a maara dị ka "mbara ihu nke Alps."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Italia » Gaa Lago di Como